शनिबार, २५ साउन
सारंगीसँगै रेटिएको जीवन २५ साउन २०७६
चुङ्बाको ‘फोटो एडिक्सन’ यस्तो घर, जहाँबाट हिमाल, पहाड र तराई हेर्ने ‘तिर्खा’ मेटिन्छ । २५ साउन २०७६
मुसाको कथा २५ साउन २०७६
अब त भाले बासे हुन्थ्यो २५ साउन २०७६
सिट नम्बर ४७ ‘के’ छोटो होस् या लामो यात्रा ! छेउमा बस्ने सहयात्रीले यात्राको अनुभवलाई मीठो वा नमीठो बनाउन सक्छन् । म त झन् करिब बीस हजार माइल टाढाको यात्रामा थिएँ, चीनको गोन्जाउसम्म । २५ साउन २०७६
सहरमा देउता आतंक यहाँ एउटा देउताले एउटा मान्छेलाई मात्रै हेर्ने हो भने देउतालाई भाग नै पुग्दैन । तर पनि मान्छेहरू देउतासँग निरन्तर रोनाधोना गरिरहन्छन् । प्रसाद चढाइरहन्छन् । मागिरहन्छन् । तर पनि मान्छेलाई देउता पुगेको छैन । २५ साउन २०७६
जसले नेपाली लोकसंगीतमा नवीन प्रयोग गरिरहे गाउँघरका कथालाई मौलिक शब्दमा उतारी मीठो भाका हाल्न माहिर कार्की चार दशकदेखि निरन्तर सांगीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । २५ साउन २०७६
अज्ञात कारबाही ‘आम्मामा, कति सुत्न सक्या हो ?’ प्यारीको कर्कशाले बिउँझिएछु । भन्दै थिइन्, ‘अनि कुन धनाढ्यको आत्मकथा तयार पार्न आजदेखि जाने भनेको होइन ?’ २५ साउन २०७६
सिर्फ मेरो छोरो न त गर्भ बोक्न उसलाई सोधियो, न त गर्भपतन गराउन नै उसलाई सोध्न जरुरी ठानियो । उसको गर्भ त अरु कसैको मर्जीमा चल्ने भाँडो न थियो । २५ साउन २०७६
नेपाली कलाकारः को, कति पढ्छन् ? कलाकारिता त्यस्तो पेसा हो, जसले समाजको यथार्थचित्र प्रस्तुत गर्छ । र, समाजलाई सत्मार्गमा अघि बढाउन अभिप्रेरित छ । नागरिककमा चेतनाको बहाव ल्याउन कलाकारिताको भूमिका प्रधान हुन्छ । तर, नेपालमा कलक्षेत्रमा लाग्नेको क्षमता र अध्ययनमाथि प्रायः प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । २५ साउन २०७६
विप्लवको ‘बेग्लै जीवन’: शब्द, सम्बन्ध र रक्सी विप्लव प्रतीकलाई सहरमा कतै देख्नु, भेट्नुभयो भने सोध्नुहोस्ः १२ हजार रुपैयाँ तिरेर शिल्पी थिएटरबाट कसको लागि खरिद गर्नुभएको थियो, ‘शकुन्तलाको औंठी’ ? कहाँ छ त्यो ?’ २५ साउन २०७६